﻿	Mfe Bean Dip - Ezi Ntụziaka
nọrọ na pennies dorito taco salad
akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwa almondine Ntụziaka maka ìgwè mmadụ
kedu okpomọkụ bụ sọseji ndị Itali mere
stuffed ọkụkọ florentine na ude chiiz
Mfe Bean Dip
Mfe Bean Dip a na-atọ ụtọ ọzọ itinye itinye kwa creamy agwa, cheese na obo nke taco n'ike mmụọ nsọ sizinin! Achịcha eghere eghe na-eme ka uzommeputa a dị nro mgbe obere cheese cheese na-eme ya creamy na ọgaranya. Alafọdụ jalapenos iji nye ya obere ose (ma echegbula, ọ bụghị onye na-ekpo ọkụ dị ọkụ)!
Nke a na-esi nri na-eme ọkụ ruo mgbe ọ na-ekpo ọkụ ma na-afụ ụfụ, zuru oke maka ịkọcha mkpụrụ osisi tortilla ma ọ bụ ọbụlagodi Akwadoro Nachos ! Gafere daisies Biko.
Ihe oriri zuru oke
Kedu onye na-ahụghị ngwa ngwa ngwa ngwa bean tinye? Kpamkpam dị mfe iji na-ewere, a bean itinye uzommeputa bụ a doro anya n'echebe! Ọ dị mfe onye obula nwere ike iti a itinye elu… na, onye ọ bụla hụrụ ya n'anya!
Ibe Tortilla? Celery ruo? Ọbụna ibe mkpụrụ osisi brussels bụ ụgbọ ala zuru oke maka nke a na-atọ ụtọ nke ọma na agwa! Ihe di uku banyere ude bekee bean tinye bu na o nwere ike iga ebe obula! Potluck? Partylọ ọrụ ọfịs? Gamebọchị egwuregwu? Ọ dị mfe ijikọ ọnụ na onye ọ bụla hụrụ ya n'anya!
Agwa Bean Dị Mfe
Kedu ihe bụ Bean Dip? Ngwurugwu bean kachasị mma bụ nke nzuzu dị mfe ịme (nke a dabara na ụgwọ ahụ n'ụzọ zuru oke). Achị nke eghere eghe (ọbụlagodi ga-eme) na chiiz ude bụ ntọala ebe a. Ihe na-ekewa agwa a na-eri nri site na mkpọ ahụ na-eme ka ọ dị ụtọ site na taco sizinin na jalapenos ole na ole! Kacha mma refried bean itinye uzommeputa everrrrrr!
Otu esi eme agwa agwa
Ezigbo ụtọ ekpomeekpo ebe a bụ taco sizinin. Nwere ike ịzụta ngwugwu nke taco sizinin ma ọ bụ nanị mepụta nke gị site na ngalaba nke kumin, galik, yabasị ntụ ntụ, ala uhie chile na nnu na ose… atụla ụjọ nnwale!
Kpoo agwa a ghere eghe, cheese cream, cream cream, na taco na-eme ka nri ya jupụta. Jiri igwekota aka ma ọ bụ whisk, ma gbaa mbọ hụ na ihe niile dị chara acha iji zere mgbawa! Cheta, nke a bụ ntọala nke nnukwu bean bekee wee họrọ agwa kachasị amasị gị (anyị na-amasị ndị nwere obere okpomọkụ)!
Jiri nwayọ nwuo yabasị, jalapenos na iko 2 nke cheese cheddar (nkọ cheddar na-agbakwunye ekpomeekpo).
Gbasaa ngwakọta n'ime efere mmiri. Top na fọdụrụ cheddar chiiz na akpọọ nkụ ruo mgbe ọlaedo na bubbly!
Voila, ọ dị nfe ahụ!
Agwa Bean di iche
Nwuo na 1/2 iko salsa ma ọ bụ kpochaa tomato Rotel
Gbanye cheddar maka cheese kacha amasị gi
Tinye taco dị ka oliv na tomato diced
Tinye 1/2 lb beef ma ọ bụ soseji na agwa agwa
More Tex-Mex sitere n'ike mmụọ nsọ
Rotel mikpuo - Crazy mfe. Crazy yummy.
7 Ngwunye Layer - Otu ọkacha mmasị!
Anụ anụ Enchilada Dip - Nnukwu ekpomeekpo!
Ọ bụ Caviar - Ọhụrụ na-atọ ụtọ (malitere ịrịa uzommeputa).
Nkeji 5 Taco Dip - Ngwa ngwa otu uzommeputa!
Mebiri ọka Mexico - Mfe na-eme n'ihu!
4,94site na16votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe8 Nkeji Oge nriiri na ise Nkeji Oge zuru ezu2. 3 Nkeji Ọrụ12 servings Onye edemedeHolly Nilsson Otu ọgaranya ude bean mikpuo ekpomeekpo! Ibu cheese na aka jalapenos ole na ole na-ewere nke a tinye na ọkwa ọzọ! Bipute Ntụtụ
▢4 ounce chiiz chiiz dị nro
▢16 ounce agwa refried mkpọ
▢½ ngwugwu taco sizinin
▢4 ounce obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ chiles dice ma kpopuo ya
▢abụọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eyịm ekewa
▢¼ iko jalapenos chopped, nhọrọ
▢3 iko cheese cheddar ekewa
Kpochapu oven na 375 Celsius F.
Iberi yabasị na-ekewa akụkụ ndị na-acha ọcha na ndị na-acha akwụkwọ ndụ. Debe akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'akụkụ.
Gwakọta cheese cream, agwa a ghere eghe, taco sizinin na ude uto na onye na-eji aka eme ihe ruo mgbe ọ ga-aga.
Tinye ndị ọcha nke eyịm, jalapenos, chiles na iko 2 nke cheese cheddar.
Gbasaa n'ime efere nri 2qt (ma ọ bụ 8x8).
Top na cheese fọdụrụ na akpọọ nkụ 20-25 nkeji ma ọ bụ na-ekpo ọkụ na cheese na-agbaze.
Ije ozi na achịcha tortilla.
Calorisị:196,Carbohydrates:6g,Protein:9g,Abụba:14g,Abụba Ajuju:8g,Cholesterol:Anọmg,Sodium:Ogbe 627mg,Potassium:65mg,Eriri:abụọg,Sugar:abụọg,Vitamin A:Ogbe 705IU,Vitamin C:Ugboro abụọmg,Calcium:Ogbe 237mg,Iron:0.8mg
Isiokwuagwa itinye, refried bean itinye N'ezieAgụụ Esie yaOnwuka ChukwuEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .